CentOS 7 final izao dia azo sintonina | Avy amin'ny Linux
Salama namana avy Fromlinux, telo herinandro lasa izay no nilazako fa mampiasa Fedora 20 miaraka amin'ny Gnome-shell aho, fa manandrana ilay vaovao ihany koa. CentOS 7 ao amin'ny RC's.
Ny vaovao ananako ho an'ireo rehetra tia an'ity fizarana klone Red Hat RHEL ity dia efa misy ny kinova farany.
Inona no entin'ny Centos 7 ho antsika?
Ity kinova ity dia misy, araka ny fantatra, Kernel 3.10, Gnome 3.8.4 na KDE 4.10 ary ny manager filefao default dia XFS na dia mazava ho azy fa azo ampiasaina EXT4 o BTRFS na dia atoroko tanteraka aza ny XFS amin'ny zava-bitany tsy misy kilema. Ho an'ireo mpitia birao koa VADIKO, Atsinanana Hita ao amin'ny tahiry EPEL :).
Ireo fiasa hafa efa hitanay tsara tamin'ny naoty nambarako tao amin'ny RHEL 7 iray volana lasa izay. Izany no antony tsy anaovako adim-piainana intsony, avelako ny rohy mivantana mankany Espana:
GNOME KDE CentOS DVD (misy ny birao roa): DVD feno (misy ny zava-drehetra) NetInstall
Mba hijerena ny vola md5 na sha256 dia avelako ny rakitra mifanaraka aminy:
Miarahaba anao zalahy ary aza adino ny manome hevitra fa omeko anao io alohan'ny ofisialy amin'ny tranokala 🙂 :).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » CentOS 7 final izao dia azo sintonina
lbgcod4 dia hoy izy:
Misy olona ve afaka manazava fohifohy hoe inona ny md5?
Valiny amin'ny lbgcod4
Miaraka amin'ny md5sum dia manamarina ireo sary ianao .. Andao, raha nampidina ireo disika tsara ianao ..
Hiseho ny valin'ny vola ary tsy maintsy mifanaraka izy.
Rehefa afaka roa andro dia niseho ilay lahatsoratra .. Vao avy nanao torolàlana momba izay tokony hatao aho rehefa avy nametraka:
Miala tsiny ry petercheco, tsy nanam-potoana hijerena azy io izahay. 🙁
Misaotra anao noho ny valinteninao ary tsy mila miala tsiny ianao: D. Somary diso fanantenana ihany aho fa te-hampahafantatra vaovao tena lehibe toa an'io ary mbola tsy nivoaka izany.Fa, lozika fa tsy hiandry 24 ora ianao hijerena raha misy mandefa zavatra .. Azo takarina tanteraka izany: D. Miarahaba anareo rehetra aho, manana lahatsoratra mahavariana ianareo 🙂
Tsara, izao miandry ny lahatsoratra: "Inona no hatao aorian'ny fametrahana CentOs"
Hahaha…. matotra, tsara, manandrana ho an'ny mpizara….
Pedro55 dia hoy izy:
afaka mampiasa ny livecd ve ianao? misy 32 bts misaotra
Valiny amin'i Pedro55
Ireo ao amin'ny Red Hat dia nanapa-kevitra ny hametraka 32 bit, manana kinova 64 kely fotsiny izy ireo, ary na dia misy aza ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo mpamorona sasany momba ny fanaovana kinova CentOS 32 bit, dia mbola tsy nisy mazava.
ergo dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, saingy heveriko fa manana rafitra fisie misafotofoto amin'ny mpitantana rakitra ianao rehefa miresaka momba ny XFS.
Mamaly an'i ergo
Mety ho .. miala tsiny aho 😀
Nisy foana ny fanontaniako tamin'ity distro ity, azo atao ve ny mampiasa azy eo amin'ny birao, sa ho an'ny mpizara irery?
satria efa novakiako fa tena tsara. noho ny te hahafanta-javatra.
DaniFP dia hoy izy:
Mazava ho azy fa azonao ampiasaina amin'ny birao; fotsiny fa tsy natao ho azy toy ny distros hafa ary mety ho sarotra kokoa ny fikirakirana azy, ohatra, i Ubuntu.
Valiny amin'i DaniFP
Raha tsy nisy olana dia nampiasa ny CentOS 6 ho rafitra isan'andro aho, afa-tsy ny fonosana sasany izay tsy tao anaty trano fitehirizana ary tsy azo natambatra satria somary tara ny kinova an'ireo tranomboky.
Raha ny CentOS 7 (aka RHEL 7), ny Fedora 19 amin'ny ankapobeny dia tohanan'ny Fedora amin'ny fomba ofisialy mandra-pivoakan'ny Fedora 21.
Mazava ho azy fa azonao ampiasaina izany ary ao amin'ny Taringa avelao ny lahatsoratra iray momba ny fomba hikirakira azy hampiasaina amin'izany 😀
GNOME 3.8.4? Tsia fa misaotra. Aleoko mifikitra amin'ny XFCE.
Ary rahoviana, CentOS 7 ve dia miaraka amin'ny Shell Shell izay ho tonga ao amin'ny RHEL? Satria azoko fa ny CentOS 7 dia miorina amin'ny RC avy amin'ny RHEL 7.
Ny zavatra tsara indrindra amin'ity famotsorana ity dia ny Red Hat dia efa nanokana ny backport ofisialiny ho azy raha toa ianao ka te hanampy endri-javatra fanampiny ho an'ilay zaza klone RHEL.
Mivavaka aho fa nohazavainao ny mpametraka sary Anaconda, satria nanandrana azy aho tamin'ny fotoana hafa ary tsy nitaingina karatra horonantsary kely kokoa noho ny 96 MB.
Manome toky anao aho fa ilaina ny mampiasa Gnome toy ny amin'ny andiany 3.8 satria ny fiovana nataony dia mihoatra ny mahavariana. Mampiasa ny KDE na XFCE aho hatramin'ny nanandramako an'i Debian niaraka tamin'ny Gnome-Shell 3.4 mbola andrana ary halako. Ankehitriny dia mampiasa mandritra ny roa volana misesy tsy misy olana ary io no birao haingana indrindra sy mahomby indrindra izay misy ao amin'ny Linux .. Raha dinihina tokoa ..
Eny tokoa, ny CentOS dia manomboka amin'ny toerana misy anao miaraka amin'ny Gnome-classic, fa amin'ny GDM dia azonao atao ny misafidy ny Gnome-Shell satria ny Gnome-classic dia miorina amin'ny plugins eo ambonin'ny Gnome-Shell. Ny Gnome-Shell dia mahazo aina kokoa amiko.
CentOS dia tsy miorina amin'ny RHEL RC fa amin'ny RHEL farany manangona ny kaody loharano rehetra. Raha heverina fa nanohana an'i CentOS i Red Hat, dia tsy naharitra iray volana akory vao niseho izy, izay heveriko fa vaovao tsara raha oharina amin'ny RHEL 6 / CentOS 6.
Ankoatr'izay, manana CentOS-7-live-KDE misy ianao raha tsy tianao ny Gnome .. Manoro hevitra anao aho mba andramo .. 🙂
Andao hojerentsika ny fomba hataon'ny GNOME Classic-Shell, satria ny marina dia tsy nifanaraka tamin'ny fitambarana fitendry akory ilay GNOME 3 Shell.
Azonao atao koa ny mampiasa ny birao Cinnamon 2.0.14 na Mate 1.8 azo alaina ao amin'ny trano firaketana EPEL 😀
Inona no nanjo an'i Slackware, petercheco?
Well Slackware dia distro tena tsara, saingy leo ny fanangonana be loatra aho .. distro tonga lafatra ny CentOS ary ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny Red Hat dia mahazatra ankehitriny .. 😀
Bah. Famerenana Slackware misy ihany koa izy ireo amin'ny binariera vonona hampiasa (izay tsy omen'i Gentoo anao).
Aza manahy fa halako koa ny manangona ireo fonosana voatahy (noho izany ny lolom-poko amin'ny Slackbuilds).
Lazaiko aminao, manangona Chromium mandritra ny adiny telo sy sasany ao amin'ny solosaina findriko satria tsy mampihomehy: D .. Ny ilaiko dia ny manana ny rindrambaiko azo alaina manomboka izao ary azo antoka ny trano fitehirizana izay manolotra azy .. Ny Salix na Slackel repos toa tsy toa izany amiko. RHEL / CentOS dia zavatra hafa ankoatry ny maha fenitra azy amin'ny tontolon'ny linux :).
Ary ny zavatra mitovy amin'izany dia mitranga amin'i Gentoo ary amin'ity lafiny ity amin'ny USE.
Aleo mampiasa BIN.
amulet_linux dia hoy izy:
k1kin Tsy hoe ny binary no tsara kokoa, raha ny tena izy dia hitako fa tena mampahazo aina ahy ny manana ny rafitra iray manontolo, satria fantatrao ny sakany sy amin'ny fomba ahalalanao azy bebe kokoa. Ny toerana tena tsara dia ao amin'ny solosaina loharano ambany. Manangona azy ho mahery ianao, ary tsy tokony hisy olana.
Na izany aza, toa tsy azo jerena ny Sabayon.
n0oir dia hoy izy:
Manoro hevitra anao aho ny hiandrasana ny hivoahan'ny Stella 7, clone of CentOS izy io fa miorina amin'ny birao
Mamaly an'i n0oir
Hey mpiara-miasa, azafady mba tsy hinoako vetivety ... Nisy olona nanana olana mitovy amiko ve mba hahatonga ny totozy hiasa amin'ny LiveCD?
Izaho dia nanana olana mitovy amin'ny CentOS6 sy Stella, nieritreritra aho fa olana voan-kernel io ary niandry ny kinova manaraka aho satria kamo tokony hanao netinstall miaraka amin'ny klavier, na izany aza ... zavatra mitovy no mitranga amiko. Mampihomehy satria any Fedora dia miasa ho ahy izy io, ao amin'ny OpenSUSE miasa amiko izy io, amin'ny RPM hafa dia miasa ho ahy izy io, tsy lazaina intsony ny tontolon'ny Debian sy Arch.
Novakiako ny momba ilay olana, saingy toa tsy nisy fanamboarana haingana ho ahy satria tsy manana IOMMU amin'ny ankapobeny ny motherboard-ko. Afaka manome tariby ahy ve ny olona?
@petercheco Mieritreritra aho fa mety ny manasongadina fa izay ao amin'ny repo EPEL ho an'ny Centos 7 dia mbola ao anaty beta, tiako holazaina, sao sanatria hotondrahanao andiana epithets ianao raha misy zavatra simba, hehe.
Salama ary misaotra anao noho ny hevitrao .. Raha ny tena izy dia mbola ao anaty beta ilay repo saingy tsy ampy herinandro dia ho raisina ho feno (farany) .. Vitan'ny tovolahy avy ao amin'ny Fedora ny fifindra-monina fonosana sasany (latsaky ny 100 ny sisa). . Ireo dia fonosana izay tsy manandanja ary tena, tena, tsy dia ampiasaina .. Izay mampiasa azy ireo dia mahalala fa mbola tsy misy izy ireo :).
Misy mahalala ve hoe aiza no iantsoana azy ireo ary aiza no ahazoako ny lohahevitry ny birao sy ny sary masina izay eo amin'ny sary amin'ity fizarana ity ihany?
Raha ny lohahevitra sy ny kisary tianao holazaina ao amin'ny mpitari-dalana ahy dia Numix Theme sy kisary faribolana Numix
Azo sintonina avy amin'ny http://numixproject.org/
paul navarro dia hoy izy:
Te-hahafantatra aho hoe iza amin'ireo no atoro anao hoe iza amin'ireo safidy ireo no manampy ahy hanangana azy amin'ny milina virtoaly, satria nakariko ny iray ary diso aho, tsy nakariko avy amin'ity pejy ity. Mety tsara raha hamaly ahy izy ireo 😀
Mamaly an'i paul navarro
Ny birao Linux tsara indrindra: Jona 2014 - Vokatra